'Ufele ukufuna ukudla okunenyama' - Ilanga News
Home Izindaba ‘Ufele ukufuna ukudla okunenyama’
‘Ufele ukufuna ukudla okunenyama’
Kuthiwa ubhokodwe ngunina wezingane zakhe abemfuna ipuleti ‘elingqangqayo sebedakiwe’
NguMnu Mfanafuthi Mkhwanazi okuthiwa ugwazwe wabulawa ngunina wezingane zakhe.
OWESIFA-ZANE wa-seNhla-nzini, KwaMbonambi, ubhekene necala lokubhokoda ngommese abulale uyise wezingane zakhe phambi kwazo ngoba edinwa wukuthi ubemfuna ukudla okunesitshulu se-nyama ngenkani.
Kuthiwa uqede ukwenza lokhu, wafonela amalungu omndeni we-soka lakhe, ewabikela ukuthi use-yibulele indodana yawo ebimfuna inyama ngo’dli’, mabazoyilanda.
Kubikwa ukuthi uMnu Mfanafu-thi Mkhwanazi (32), uxabane nonina wezingane zakhe ezingamawe-le, bebanga ukuthi kungani emphakela ukudla okungenayo inyama.
Kuthiwa kube sekusuka ingxabano phakathi kwabo, umufi wazama ukushaya unina wezingane zakhe ongazange azibeke phansi, wadonsa ummese obuphezu kwe-tafula wamgwaza ngawo esifubeni amanxeba amabili, washonela khona endlini kubuka izingane zabo.
Kuthiwa umufi ubesehashukele inyama nje, yingoba bebezitika ngotshwala nonina wezingane zakhe.
ILANGA lixoxe nomzala kamufi uNkz Nokuthula Mthethwa, othe basethukile ngesenzo sikanina wezingane zomzala wakhe, soku-mgwaza ambulale kubuka izinga-ne zabo.
“BekuyiSonto ebusuku sesile-le, kwangena ucingo sifonelwa ngumsolwa (emgagula ngegama), esitshela ukuthi masize sizolanda isidumbu sikamzala wethu ngoba usembulele. Usitshele ukuthi umzala ubemshaya. Ubekhuluma nathi ocingweni ezwakala engenandaba,” kusho uNkz Mthethwa.
Uthi umzala wakhe ubesenesi-khathi ethandana nomsolwa. Uthi umzala wakhe ubulawa nje, ubehlala kubo kamsolwa begade umu-zi njengoba kungasekho muntu omdala khona.
Bebehlala nezingane zabo ezi-ntathu, ezimbili ezingamawele aneminyaka emibili okungezomzala wakhe nomsolwa, kanti enemi-nyaka ewu-6 kayizalwa ngumzala wakhe. Uthi batshelwe ukuthi ko-nke lokhu kwenzeke izingane zibuka.
“Sisuke ngaleso sikhathi eqeda ukusifonela ukuba sizolanda isidumbu sikamzala wethu, sahla-ngatshezwa yigazi ligcwele endlini, umsolwa nezingane bengasabonwa.
“Omakhelwane basitshele ukuthi laba bebehleli ndawonye be-phuza utshwala, ingxabano iqale ngesikhathi umufi ekhala ngokuthi ulambile. Umsolwa wamphakela ukudla okungenayo inyama, umzala wathukuthela wagana unwabu efuna inyama,” kusho uNkz Mthethwa.
Uqhube ngokuthi umzala wakhe ubulawa nje, ubeseke wazama ukuhlukana nomsolwa bebanga ukuthi uma esephuzile uba nolaka, amlwise. Uthi bekungakapheli ngisho izinyanga ezintathu bebu-yelene. Uthi nakhona lapho, umzala wakhe ubuyele kunina wezinga-ne zakhe ngoba ethi usecabangela izingane.
“Buyamehlula utshwala umso-lwa, njalo uma esephuzile uxabana nabantu, nathi ubeke asifonele asibize ngaphansi kweziketi, esi-thuka.
“Siphatheke kabi siwumndeni uma esesifonela ngoMsombuluko ngabo-11 ebusuku esichomela ngokuthi usephumile ejele, inkantolo imkhiphe phambili, imthole enge-nacala. Uqede ukusho lokho wabe esefuna izingane zakhe ngenkani kasaze samnika,” kusho uNkz Mthethwa.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekile lesi sigameko washo ukuthi amaphoyisa amthathile umsolwa ngecala lokubulala. Uthi icala kalingenanga enkantolo, umsolwa udedeliwe.
Previous articleKusolwa umona uthisha eshiselwa imoto
Next articleUTshatha ushiye angalazi kofakazi bakaJehova